Shane Black Tweet nwere 'The Predator' Fans na-egwu "M Nledo" - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Shane Black Tweet nwere 'The Predator' Fans na-egwu "M Nledo"
Shane Black Tweet nwere 'The Predator' Fans na-egwu "M Nledo"
edere ya Eric Panico April 2, 2018
Onye edemede / Director Shane Black bipụtara foto na Twitter na-ama njakịrị nke ọ tụrụ anya ya n'ihu The eri ibe! Ma enwekwala obi anụrị. Ihe oyiyi ahụ na-egosi oke ọhịa ọhịa, nke, na ilele ya anya mbụ, o yiri ka enweghị ndụ ọ bụla. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na Predator anaghị ezo na nzuzo.
Can nwere ike ịhụ ihe ọ bụla na foto ahụ?
Shhhh…. Ọ na-abịa. pic.twitter.com/iaQty5wy3Y
- Shane Nwa (@BonafideBlack) March 30, 2018
Dị ka nne ma ọ bụ nna na-ahazi akwa ichu nta nke Ista na Eprel Fool's Day, Black nwere ike ịnwe ndị Fans na-achọgharị ahịhịa na-achọ ihe nwere ike ọ gaghị anọ ebe ahụ. Ihe oyiyi ahụ dị obi ọjọọ ma nwee ọgụgụ isi n'otu oge ahụ. Enwere ike inwe ọtụtụ ndị na - anụ ọkụ n'obi n'ebe ahụ na - etinye aka na ntanetị ha, ma na-abanye na inch nke ihe osise ọ bụla.
Enweela nkọwa maka ihe nkiri a ka ọ dị nso n'obi, mana ekwela ka ụkọ ahịa nweta nsogbu gị. Shane Nwa so na aha ikike site na mbido, na-ekere òkè nke Hawkins na ihe nkiri mbụ. Ederede / iduzi filmography na ihe genre na-ekwu maka onwe ya na Egwuregwu Agha ihe nkiri, Iron Man 3, na Nice Guys. Ọ maara etu esi ede ederede dị egwu, ihe nkiri a na-enyo enyo, ma jikọta obere ọchị n'ọchịchị ya. Dị ka onye na-anwụ anwụ nke na-akwado ihe nkiri mbụ, echere m na usoro ahụ dị na aka dị mma.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị mụtara n'aka onye na-ede akwụkwọ Fred Dekker na usoro a ka na-aga n'ihu reshoots, ma a teaser trailer kwesịrị izipu anya. Bọchị ntọhapụ ka edobere ugbu a maka Septemba 14, 2018.
Ka ọ dị ugbu a, echere m na m na-ekwuchitere ndị niile na-akwado m mgbe m sịrị, “BANYERE TRAILA!”
Ị nwere obi ụtọ maka The Predator? Jide n'aka na itinye ihe a kwuru ma ọ bụrụ na ị chere na ị hụrụ ihe na foto Shane Black Tweeted! Onye mbụ ịchọta ihe bụ "mmekọahụ tyrannosaurus!"
eri ibefoto anụShane Nwashane nwa erishane nwa tweetshane oji twitterThe Predatoronye na-eri ihe nkirionye na-eri ibe ya
'Ezigbo Onye Nchọpụta' Oge 3 Na-efu 'Green Room' Director
James Wan, na Roy Lee Tọrọ ka ha wepụta 'The Tommyknockers'